Banyere Anyị - Shandong Drick Instruments Co., LTD
Drick Instruments co., Ltd. na-majoring na-eme nnyocha, n'ichepụta na oru ọrụ maka laabu na Industry ule Instruments.
Anyị na-eme ihe dị ka gị n'ụlọnga na-enye ule ọrụ na ngwaahịa nke ụwa nile mara ụlọ ọrụ dị na Chinese ahịa. Na mgbakwunye, anyị na-arụsi ọrụ ike na-akwalite ọrụ dị ka ọrụ ahia, oru nkwado na mgbe-ire ọrụ. Anyị na ngwaahịa na-etinye na ubi ka papermaking, nkwakọ, bipụtara; roba na plastik; akwa na-abụghị kpara Industry; nri, na nkà mmụta ọgwụ na wdg
Drick Instruments Co., Ltd. enwetawo CMC (China Metrology Asambodo) (Nke 01000127), European Union OA asambodo, PRC onwe mbubata na mbupụ ikike, wdg O nyere ọkachamara ule ngwá iri puku anụ ụlọ ahịa, na ya na ngwaahịa e exported North na South America, Australia, na European Union, na Middle East na Southeast Asia, wdg
Mgbe oruru, dum mkpara nke Drick dịrị n'otu ọnụ, na-arụ ọrụ ike na otú ahụ eme ka anyị ụlọ ọrụ na-a pụrụ iche otu na iri na Usoro dị ka mgbọrọgwụ ya, esighịkwa ezigbo Usoro onwunwe na nke elu mma. The ụlọ ọrụ nwere na-arụ ọrụ nke ahịa na ike na elu àgwà na-arụ ọrụ nke oru nkwado na ezigbo ihe ọmụma nke ngwá na Usoro na Usoro n'itinye. E wezụga, anyị na-enweta na-arụ ọrụ nke mgbe-ire ọrụ n'ozuzu technology ukwuu ahụmahụ. Advanced ngwaahịa, na-atọ Usoro, siri ike na-arụ ọrụ, cordial ọrụ, ha niile ga-amụ ihe pụrụ iche omenala Drick taa.
Drick mgbe niile na-eme kwụpụ na ọhụrụ technology na, na-akwa na-enye ndị kasị elu ngwaahịa ahịa anyị. Drick-emesi technology ọzụzụ na àgwà mmepe ha mkpara. Ma si otú ahụ ụlọ ọrụ na-enye ihe fọrọ nke nta zuru okè na-ejere ndị ahịa. The kpagburuibe uru eketịbede na technology, ngwaahịa na ọrụ na-ewetara ndị ahịa anyị nza nke uru na-eji ndị ọhụrụ technology na ngwaahịa.